17/03/2018 - 18:30 : AKON'NY RIVODOZA: 7 maty ary 10 292 ny traboina, 2 415 nafindra toerana raha ny tatitry ny BNGRC tamin'ny 6ora hariva teo.
17/03/2018 - 17:00 : FIFIDIANANA 2018: Nanao fanambarana ny haha kandida filoham-pirenena azy i José Vianey, filoha mpanorina ny Antoko RAM (Rasselblement pour l'Avenir de Madagascar).
17/03/2018 - 15:00 : BAOLINA KITRA: Handeha mivantana amin'ny fahitalavi-pirenena TVM ny lalao ara-pirahalahiana eo amin'ny Barean'i Madagasikara sy ekipam-pirenen'i Togo hatao any amin'i Kianjan'i Saint-Leu La Forêt Frantsa.
Archive du 20170912
Lalan’ny Frankofonia Namono olona indray
Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina teny amin' ny lalam-baovaon’ny Frankofonia na ny "ROCADE" Andohatapenaka, omaly 11 septambra manodidina ny tamin’ny 10 ora alina.
Praiminisitra Mahafaly Olivier “Hamboarina ny RN6 sy RN5a amin’ny 2018”
Hatomboka amin'ny volana janoary ho avy izao ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha-6 na RN6 mampitohy an'Ambanja amin'i Diego, ary amin'ny volana martsa 2018 no hanombohana ny fandrakofana ho tara ny lalam-pirenena RN5a mampitohy an'Ambilobe amin'i Vohémar.
Datim-pifidianana 28 novambra 2018 ny fihodinana voalohany
Ho ampahafantarin’ny CENI na Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana ampahibemaso ny rindrambaiko na “logiciel” hikirakirana ny voka-pifidianana.
Sendika sy ny politika Tsy mitombina ny fanenjehana
Mifampiofana mandritry ny roa andro, omaly sy anio, etsy amin’ny Le Pavé Antaninarenina mikasika ny tokony ho fomba fijoron’ny sendika eo anatrehan’ny toe-draharaha politika misy eto amin’ny firenena ny avy eo anivon’ny randrambaon’ny sendikà CTM-SSM-FES.
Raharaham-pirenena Vara-datsaka ny fanambaran’ny SECES
Hentitra ny fanambaran’ny SECES (Sendikan’ny Mpampianatra-Mpikaroka sy Mpikaroka-Mpampianatra) Sampana Antananarivo omaly alatsinainy 11 septambra, manoloana ny fikorontanan’ny raharaham-pirenena.
Lalàmpanorenana “Antony goavana vao azo kitihina”, hoy Ranesa Firiana
Miteraka resabe ny mety hanovan’ny fanjakana HVM ny lalàmpanorenana.
Kaominina Antsirabe Voalohany Nizarana fitaovam-pianarana ny zanaky ny mpiasa
Tao am-piangonana Vola sandoka no nataony rakitra
Teo am-panisana rakitra ny tao amin’ny fiangonana FKJM iray ao Ambatondrazaka ny alahady 10 septambra teo no taitra raha nahita vola sandoka iray alina Ariary vaovao.
Andranomanelatra-Antsirabe II Trano 14 tafo noravana, 150 tsy manan-kialofana
Trano niisa 14 tafo indray no voatery noravana tao amin’ny fokontany Anosimboahangy, kaominina Andranomanelatra.
Ivato Hanana tsena manara-penitra
Mihazakazaka ny asa fanamboarana fotodrafitrasa eny amin’ny kaominina Ivato, distrika Ambohidratrimo.
Andoharanofotsy Mampialavoly ny Kaominina
Miezaka mijery ireo ankizy mahay ao amin’ny faritra iadidiany ny Ben’ny tanànan’ny kaominina Andoharanofotsy amin’izao famaramparanana ny vakansy lehibe izao hahafahan’izy ireo miala voly kely.
Fanomezana sehatra ny tanora Ireo Tandapa no tena manidy varavarana
Niresaka ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa hanome sehatra ny tanora hahafahana mampandroso bebe kokoa ny firenena.
FJKM Ambodihady Vaovao Voatokana ny Lycée Privé Lovanavela
Tontosa tamin’ny alahady 10 septambra teo ny fitokanana ny Lycée Prive FJKM Lovanavela, tsangambaton’ny faha-125 taona niorenan’ny Fjkm Ambodihady Vaovao manana an’i Pastera Raveloson Mamy mivady mitandrina ao aminy.
Centre Betania Ankasina Nanome tanana ny mpiangaly Jujitsu
Avy amin’ny fandalovana teto Madagasikara ka nanomezany fiofanana an’ireo Malagasy mpiangaly ny taranja Jujitsu dia nahangona vary 8 gony mahery kely avy amin’ny fanentanany an’ireo klioba niara-niasa taminy toy ny Area Ryu,
Analamanga Rugby Mafanafana eny amin’ny kianjan’i Malacam
Mafanafana ara-bakiteny ny fanatrehana an’ireo fihaonana rugby fiadiana ny TOP 9 miaraka amin’Analamanga Rugby etsy amin’ny kianjan’i Malacam Antanimena ankehitriny.
Hamorona asa sa mpiasa ?
Ny tontolon’ny asa eto amintsika indray no nezahan’ny filoham-pirenena novoizina tamin’ny alalan’ilay fandaharany manokana amin’ny haino aman-jery tamin’ity herinandro ity.
Fitaterana eny Atsimondrano Hiaraka handray fepetra ny kaominina rehetra
Miara-mizaka ny olana ateraky ny asa fitateram-bahoaka eto amintsika avokoa amin’izao fotoana ny kaominina rehetra.
Fandriampahalemana Hanao “miracle”?
Hotontosaina eny amin’ny CCI Ivato anio talata 12 septambra manomboka amin’ny 4 ora tolakandro ny fanolorana drafitra fanatsarana ny tontolon’ny fandriampahalemana PN-RSS (Plan National de la Réforme du Secteur de la Sécurité) eto Madagasikara.